Faahfaahino Ka Soo Baxaya Duqeeyn Ciidamada Mareykanka Ka Fuliyeen Deegaanka Tiyeeglow – Goobjoog News
Taliska Ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee looyaqaano AFRICOM ayaa war kasoo saaray duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ay ka fuliyeen Deegaanka Tiyeeglow ee Gobalka Bakool .
warka ka soo baxay Taliska Africom ayaa lagu yiri ” Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa hal weerar ka fuliyay nawaaxiga Tiyeeglow, Soomaaliya, Janaayo 18, 2021. Qiimeyntii ugu horreysay waxay muujineysaa in duqeynta ay ku burburtay hal xarun oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. “Qiimeynta hore ee taliska ayaa ah in qof rayid ah uusan ku dhaawacmin ama ku dhiman hawlgalkan” ayaa lagu yiri warbixinta oo kasoo baxday xafiiska AFRICOM ee Soomaaliya.”
Duqeeyntan oo ay fuliyeen diyaaradaha Taliska AFRICOM ee mareykanka ayaa lagu sheegay in la bartilmaameed saday fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen Tiyeeglow .
“Al-Shabaab waxay Soomaaliya ka fulisay weeraro ismiidaamin iyo argagax leh oo ay ku jiraan weerarkii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameedsaday hoggaanka Danab iyo sidoo kale ololeyaal qaraxyo oo dhowaan ay ku barakaceen kumanaan rayid Soomaaliyeed. Waxaan sii wadi doonnaa taageerida saaxiibadeena iyo carqaladeynta dadaallada Al-Shabaab, ”ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Cirka ee Mareykanka Maj. Gen. Dagvin Anderson.
Howlgkan ay iska kaashanayeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AFRICOM, ayaa noqonaya midkii ugu horeyay kadib markii ay ciidamada mareykanka ay xaqiijiyeen intooda badan in ay isaga baxeen Soomaaliya.